Ezinokuthenjwa: Yondla iimveliso zakho kumaxabiso okuThelekisa iiwebhusayithi, amaQabane, iiMarike, kunye neeNethiwekhi zeNtengiso | Martech Zone
Ukufikelela kubaphulaphuli apho bakho lelinye lawona mathuba makhulu kuso nasiphi na isicwangciso sentengiso yedijithali. Nokuba uthengisa imveliso okanye inkonzo, upapasha inqaku, udibanisa ipodcast, okanye wabelana ngokubekwa kwevidiyo kwezo zinto apho kukho inxaxheba, abaphulaphuli abafanelekileyo kubalulekile kwimpumelelo yeshishini lakho. Kungenxa yoko le nto onke amaqonga enesixhobo esibonakalayo somsebenzisi kunye nesinxibelelanisi somatshini esinokufundwa.
Ukujonga emva kulo nyaka, ukutshixwa kwezinto kuguqula intengiso kunye ne-ecommerce ijonge ezantsi. URob Van Nuenen, CEO yengcali eChannable kunye ne-e-commerce, ibonelela ngolu luvo lulandelayo malunga nokuphazamiseka:
Izitena kunye nodaka zavula ivenkile ukuba babengenayo i-intanethi ngaphambili. Ummangaliso kukuba wakhawuleza kangakanani iivenkile ezincinci zavela Kwaye ngoobani abanini - abathengisi abasandula kusebenza okanye abangaphangeliyo benza iivenkile kwiimveliso ezifunwayo ukubenza bakwazi ukugcina umvuzo ungena.
Iivenkile ezikwi-Intanethi zi ukwahlula amajelo abathengisa kuyo-kwihlabathi jikelele
I-COVID yayiyifowuni yokuvuka ukuthengisa kwezentlalo -Kwaye ngoku ithathwa njengejelo eliyimfuneko
Iitshaneli ezikwi-Intanethi ezinje Uphando ZIBALULEKILE ekuxhaseni uluntu lwasekhaya ngokugcina abathengi bengingqi
Iqonga lakhe, Ekhoyo, liqonga elikhokelayo le-e-commerce lehlabathi elixhobisa abathengisi bedijithali, iimveliso kunye nabathengisi abakwi-Intanethi ukoyisa le mingeni kunye namathuba.
Yintoni uKondla kweMveliso?
Ukutya kwemveliso yifayile yedijithali equlathe umtya wedatha enolwazi yeemveliso ezininzi. Ukutya kwemveliso kunokusetyenziselwa ukudibanisa idatha ngexesha lokwenyani kwi-ecommerce yakho okanye iqonga leempahla ngaphandle kwezinye iinkqubo-kubandakanya ulawulo lokudibana, amaqonga okuthengisa nge-imeyile, amajelo eendaba ezentlalo, amaqonga e-ecommerce, kunye / okanye neqonga lolawulo lwentengiso.
Inokuchaneka: Thengisa iimveliso zakho naphina
Ekhoyo ibonelela ngesixhobo esikwi-Intanethi kwiiarhente zentengiso kunye nabathengisi abakwi-Intanethi ukuba bathumele iimveliso okanye iinkonzo zabo kwiindawo zentengiso ezahlukeneyo, iinjini zokuthelekisa, kunye namaqonga abambiseneyo. NgokuChanable, amashishini anokucoca ngokulula, agqibe, kwaye enze ulwazi lwabo ngemveliso ukufikelela kwiziphumo ezingcono. Iqonga ke lithumela ulwazi olwenziweyo kulo naliphi na ijelo lokuthumela ngaphandle elizikhethele lona (umz.Amazon, Shopping.com, okanye uGoogle).
Iimpawu zoLawulo lweeMveliso eziChaphazelekayo zibandakanya
Ukwahlulahlulwa kwemveliso ngokulula Isixhobo solawulo lokutya sikuvumela ukuba uququzelele iimveliso zakho ukuze utshatise iindidi zesitishi sokuthumela kwelinye ilizwe. Nge-Channable, ungenza ngokukhawuleza uvelise iindidi ngokusebenzisa ukwahlula ngobuchule kwamanye amaqonga ezentengiso. Le nkqubo inokukhawulezisa ngokubonakalayo ukuseta kokutya okutsha, yonyuse ukubonakala kwakho kwisiteshi, kwaye wandise ukufikelela kwakho.
Unamandla ukuba-emva koko-imigaqo Ngokwesiqhelo, uya kufuna umphuhlisi ukuze ahlaziye imveliso yakho yokutya. Ngenkxaso yesixhobo solawulo lokutya, kulula ukuba-ke-imigaqo ikuvumela ukuba 'ukhowudi' ngokwakho. Le mithetho iya kusetyenziswa kwiimveliso ezintsha ezongezwa kwivenkile yakho ekwi-Intanethi. Unokulawula ngokuchanekileyo ukuhamba kweemveliso kwisitishi ngasinye sokuthumela ngaphandle kunye nokuguqula ulwazi ngaxeshanye. Isixhobo esifanelekileyo solawulo lokutya siya kukubonelela ngengxelo ekhawulezileyo emva kokuba umthetho ngamnye usetyenzisiwe kwikhathalogu yemveliso.
Ukutya okuphezulu komgangatho wedatha Ukuthumela ngaphandle kumgangatho ophezulu, ukondla idatha esempilweni kuya kwandise ukubonakala kwakho kwi-Intanethi. Ngokubanzi, kufuneka utshatise 'amasimi' aqulathe ulwazi lwemveliso kwimpahla yakho yokungenisa ngaphakathi 'kwimihlaba' efunekayo yokutya okuthengiswayo. Isixhobo solawulo lokutya siyazazi zonke iinkcukacha zokutya kwiindlela zayo ezidibeneyo kwaye sihlala sihlaziyiwe kunye notshintsho kunye nohlaziyo.
Ukutya kunye neeAPIs -Ukuqinisekisa ngokwakho ukuba ulwazi lweemveliso ezithunyelwa ngaphandle, ezinje ngesitokhwe, zihlala zichanekile zingathatha ixesha lakho elininzi. Ezinye iindawo zentengiso zibonelela ngoqhakamshelwano lwe-API kwivenkile yakho ekwi-intanethi evumela ukutshintshiselana okuzenzekelayo, okuqhubekayo kolwazi phakathi kwamaqonga amabini. Izixhobo zolawulo lokutya zinokungenisa idatha yakho yokondla rhoqo ukuqinisekisa ukuba uluhlu lweemveliso zakho kunye nolwazi lwakho olusemva luhambelana neendlela zakho zokuthumela ngaphandle.
Ukungeniswa kwezinto okwenzeka ngoku okuvela kwiLightspeed, Shopify, ecManager, Magento, CCVShop, Divide.NOW, WooCommerce, Mijnwebwinkel, inRiver, PrestaShop, Shopware, BigCommerce, nokunye. Izibonelelo ezingatshintshiyo Ngaphezu kwe2500 iiwebhusayithi zokuthelekisa amaxabiso, iinethiwekhi ezihambelanayo, kunye neendawo zentengiso zokuthumela ngaphandle.
tags: Ulawulo lwentengiso ukondla imvelisoUkutya kwemvelisoUkutya kwemveliso yeAmazonI-CCVShopitshintshweimigudui-covid-19YahlulaecManejalaeCommerceukutya kwe-ecommerceUkutya kwemveliso ye-ecommerceukuthengisa imveliso yeimeyileUlawulo lokutyauphandoukuqhubazibaneMagentoMijnwebwinkelukutya kwemveliso ye-ppcPrestaShopukutya kwemvelisoUlawulo lokutya kwemvelisoURob Van NuenenthengaIvenkileukondla imveliso yemidiya yoluntuukuthengisa kwezentlalowoocommerce